Mombasa | Akụkọ Njem
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 500 site na Nairobi bụ agwaetiti nke Mombasa, obodo nke abụọ kasị ukwuu na Kenya mgbe isi obodo nwere ihe dị ka mmadụ 700.000 bi na ya. E kewara ya site na kọntinenti Africa site na iyi abụọ ma jikọta ya na ọtụtụ akwa.
Mombasa nwere nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri na njem nleta. Ebe ọ bụ na e guzobere ya na narị afọ nke XNUMX, ọ bụ obodo nwere àgwà ya. Ọ na-eku ume mmetụta Arab, Indian na European nke a pụrụ ịhụ n'ọtụtụ ụlọ okpukpe ya na nke obodo ya. Chọrọ ịma Mombasa?
1 Utezọ njem site na Old Town
1.1 Ọdụ ụgbọ mmiri nke Mombasa
1.2 Pleslọ arụsị na Mombasa
1.2.2 Ndị Hindu
1.2.3 Ndị Kraịst
1.3 Owuwu obodo
1.4 Ozi bara uru maka ịga Kenya
Utezọ njem site na Old Town
Ọdụ ụgbọ mmiri nke Mombasa
Nwere ike ịmalite njem site na ọdụ ụgbọ mmiri, ebe enwere ọtụtụ klọb na họtel. Moslọ alakụba Basheiky Mandhry wuru na ntọala nke narị afọ nke XNUMX nọkwa ebe a.
Site ebe ahụ ka anyị na-aga Mbaraki ebe Mbaraki Pilar dị, otu n'ime akara nke Mombasa. Ọ bụ ili nke onye isi agbụrụ oge ochie nke nwere ogidi limestone nwere coral polyps na coral plaster finish. A na-agba ya gburugburu site na baobab ma nsonaazụ ya dị ịtụnanya.
Pleslọ arụsị na Mombasa
Alakụba nke Bohra nwere nnukwu minaret, nke Baluchi Jundaan nke nwere dome squat, nke Ismaili ya na façade square ya na nke angular Bondeni pụtara dị ka ihe atụ nke ije alakụba.
Mombasa nwekwara ụlọ arụsị ndị Hindu nwere nnukwu mmasị dịka ụlọ ụka Jain pastel na Langoni Street, Slọ Sikh dị na Mewmbe Tayari Street na Slọ Swaminaryan dị omimi nke Haile Selassie wuru na 1955.
Na Nkrumah Street enwere ụlọ nnọchi anya ọzọ nke Mombasa: Katidral Katọlik nke Mmụọ Nsọ. Ndị Alakụba na-emetụta ụka Anglịkan dịkwa mma ịga leta.
Gagharị na Old City bụ ihe obi ụtọ. Ebe dị mkpa iji gaa n'oge njem Mombasa bụ Fort Jesus, ebe e wusiri ike n'oge ochie nke ndị Portuguese wuru na 1593. Ọ na-egbu etu esi echekwa bụ olulu mmiri iji chekwaa mmiri, bastions, foduru nke ụgbọ mmiri San Antonio de Tanna, nchịkọta nke seramiki si n'ụsọ oké osimiri na Omani Arab House, ụlọ Ottoman site na narị afọ nke XNUMX. Ihe omuma atu ozo nke ndi Portuguese wuru bu Fort St. Joseph.
Buildingslọ ndị ọzọ nwere nnukwu mmasị nke ejiri asụsụ Bekee ha nwere mmetụta dị ukwuu nke India bụ Casa Leven, akwa mmiri ọhụrụ nke Nyali na Treasury Square. Ihe kwesiri ileta bu ulo ahia Datoo Auction, Nkume Nkume, Castle Hotel na ebe ndi ozo di nma ebe i nwere ike izu ike n'okporo uzo ya na ulo Dodwell nwere oke ulo si Mangalore.
N'aka nke ọzọ, ụlọ ikpe ochie na-arụ ọrụ dị ka ebe ngosi nka na-adịghị mma. Enwere ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ ma ị ga - ahụ ụfọdụ mmetụta ndị Britain na ụlọ ahụ.
Ozi bara uru maka ịga Kenya
Mịnịstrị na-ahụ maka Ofesi na Spain na-atụ aro ka ị kpachara anya mgbe ị na-aga Kenya ma zere mpaghara ụfọdụ dịka mpaghara ugwu ugwu ọwụwa anyanwụ, ókèala Somalia na mkpọmkpọ ebe nke Nairobi.
Achọrọ visa maka ọtụtụ ndị si mba ọzọ ma dị ngwa. Thezọ kachasị mfe iji, kwụọ ụgwọ ma nata ya ihe ọ bụla n'otu ntabi anya bụ sistemu e-visa, ụzọ gọọmentị Kenya maka ịntanetị.
Bankslọ akụ niile gbanwere dollar US, euro, na pound Britain na shilling Kenya. Enwere ndị ATM n’obodo ndị pere mpe, yabụ ọ bụ ihe amamihe dị na ya iburu debit na kaadị kredit na ego.
Agbanyeghi na enwere ike igbanwe otutu ego na Nairobi na Mombasa, na mpụga obodo ndia a ga enwe nsogbu ndi ozo karia dollar US, euro, na pound ndi Britain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Mombasa